दाँत खिइने समस्या छ ? यस्तो छ उपचार – Bannigadhi Today
दाँत खिइने समस्या छ ? यस्तो छ उपचार
एकेन्द्र खत्री २०७७ माघ १५, बिहीबार ११:१६
मुखमा सात सय किसिमका व्याक्टेरिया हुने गर्छ, जसको संख्या करौडोको हाराहारीमा हुने गर्छ ।
यही व्याक्टेरियाले दाँत तथा मुखको समस्याबाट बचाँउने गर्छ । यदी मुख, दात तथा जिब्रोको सफाई सही तरीकाले नभएको अवस्थामा उक्त व्याक्टेरियाले दात तथा गिजालाई हानी पु¥याउने गर्दछ ।
अन्यथा समयमै उपचार नगरेको खण्डमा पायरिका कारण दाँत तथा गिजामा संक्रमण भई दाँत झर्न थाल्छ
दाँत सफा, बलियो राख्नका लागि नियमित ब्रस गर्ने, जाँच गर्ने गर्नुपर्छ । खाना खाएपछि मुख कुल्ला गर्नुपर्छ ।
१। दाँत स्वस्थ राख्नुहोस्
राम्रो चम्किलो र स्वस्थ दाँत हाम्रो अनुहारको सुन्दरतामा थप निखार ल्याउन मद्दत गर्छ । तर दाँतको सहि तरिकाले हेरचाह नगर्दा दाँतमा विभिन्न प्रकारको रोग लाग्न सक्छ । पहेँलो दाँत हुनु, साँस गन्हाउनु, गिँजाको समस्या, क्याभिटि, पाइरिया, पेरियोडाइटिस, जिंजिवाइटिस आदि बिरामी हुन सक्छ ।
२।दिनमा दुइपटक ब्रश गर्नुहोस्
दाँतलाई सुरक्षित राख्नको लागि नियमित रुपमा सरसफाइ गर्नुपर्छ । खाना खाइसकेपछी दिनमा दुइपटक ब्रश गर्नुपर्छ । टुथब्रश सानो खालको प्रयोग गर्नुपर्छ । ताकि दाँतको कुना कुनामा सजिलैसँग पुगोस् ।
३।सफ्ट डिंग्सबाट बच्नुहोस्
विभिन्न प्रकारको सफ्ट डिं«ककोे प्रयोगले पनि दाँतलाई हानि पु¥याउन सक्छ । त्यसैले यस्ता प्रकारको पेयपर्दाथबाट टाढै बस्नुपर्छ । किनकि यस्ता डिंग्समा अम्लिय पर्दाथ हुन्छ ,जसले दाँतको इनामेलमा भएको खनिजलाई घुलाइदिन्छ र दाँत कमजोर हुन थाल्छ ।
४। गुलियो खानेकुरा बाट बच्नुहोस्
गुलियो खानेकुरा दाँतलाई मात्र नभई स्वास्थ्यको लागि पनि हानिकारक हुन्छ । त्यसैले यसको सेवन कम गर्नुपर्छ । दाँतको माथिल्लो तहमा भएको जीवाणुले गुलियोलाई अम्लमा परिर्वतन गरिदिन्छ त्यसैले गुलियो भएको खानेकुराको प्रयोग सिमित मात्रामा गर्नुपर्छ ।
५।फलफुलको सेवन गर्नुहोस्
फलफूलको सेवनले हाम्रो शरिरमा ऊर्जा मिल्छ । रोग लाग्न बाट बच्न सकिन्छ । कुनै फल यस्तो पनि हुन्छ जसको सेवनले दाँतलाई क्याभिटि बाट बचाउँन सकिन्छ । स्याउ, गाजर आदिको नियमित सेवनले दाँतलाई फाइदा हुन्छ ।
६।पर्याप्त पानी पिउनुहोस्
पानीले हाम्रो शरिरमा भएको बिषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ । साथै हाम्रो पाचन प्रक्रिया राम्रो बनाउँछ । यसको साथै दाँतलाई सेतो र चमकदार बनाइ राख्न पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले दिनमा ८ देखि १० गिलास पानी पिउनु पर्छ ।
७।दाँतले अरु काम नगर्नुहोस्
यदि दाँतले बोतलको बिर्को खोल्ने , सुपारि फुटाउने , जस्ता काम गर्नुहुदैन् । यस्ता काम गर्दा दाँतको क्याप निस्किने या टुट्ने हुन सक्छ ।
८।नियमित जाँच गराउनुहोस्
दाँतमा कुनै समस्या नआए पनि नियमित रुपमा चेकअप गर्नपर्छ । यदि कुनै समस्या जस्तै९दाँत दुख्ने ,गीजाबाट रगत आउने आदि भएमा दाँतको चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । समस्या नभए पनि ६(६ महिनामा जाँच गराउनुपर्छ ।
ट्रक दुर्घटनामा दुई जनाको ज्यान गयो
चुनावी प्रचारप्रसार छाडेर रक्तदानमा उपमेयर
‘गर्मीबाट शरीरलाई बचाउन’ सातु र सर्वत खाएर अक्षय…
विश्वभर ८० प्रतिशतले बढे दादुराका बिरामी
अछाममा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि निःशुल्क घुम्ती शिविर…